Aịzaya 52 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Zayọn, teta! (1-12)
Ụkwụ ndị na-ezi ozi ọma mara ezigbo mma (7)
Ndị nche nọ na Zayọn ji otu olu na-eti mkpu (8)
Ndị na-ebu arịa Jehova kwesịrị ịdị nsọ (11)
A ga-ebuli ohu Jehova elu (13-15)
Onye e mere ihe otú ndị ma ya na-agaghị amata ya (14)
52 Zayọn,+ teta! Teta! Mee onwe gị ka ị dị ike.*+ Jeruselem, bụ́ obodo nsọ, yiri uwe gị mara mma.+ N’ihi na onye a na-ebighị úgwù na onye na-adịghị ọcha agaghị abata n’ime gị ọzọ.+ 2 Jeruselem, bilie, tichapụ onwe gị ájá ma nọrọ n’oche. Zayọn a dọọrọ n’agha, tọpụ agbụ e kere gị n’olu.+ 3 N’ihi na Jehova kwuru, sị: “E rere unu n’anataghị ego,+A gaghịkwa eji ego gbapụta unu.”+ 4 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: “Na nke mbụ, ndị m gara biri n’Ijipt, bụrụ ndị mbịarambịa.+ Ndị Asiria mechakwara mesie ha ike n’agbanyeghị na o nweghị ihe ha mere ha.” 5 Jehova kwuru, sị: “Gịnịzi ka m ga-eme ebe a? N’ihi na a kpọọrọ ndị m n’akwụghị ihe ọ bụla.” Jehova kwukwara, sị: “Ndị na-achị ha nọ na-eti mkpu ọṅụ na ha emeriela.+ Ha nọkwa na-emebi aha m mgbe niile.+ 6 N’ihi ya, ndị m ga-amara aha m.+ Ọ bụ ya mere ha ga-eji mara n’ụbọchị ahụ na ọ bụ mụnwa na-ekwu. Ọ bụ mụnwa na-ekwu ihe a.” 7 Ụkwụ onye si n’elu ugwu ziri ozi ọma na-abịa mara ezigbo mma.+ Onye ahụ na-ekwu na udo adịla.+ Ọ na-ekwu na ihe ka mma abịala. Ọ na-ekwu na a zọpụtala ndị mmadụ. Ọ na-asị ndị bi na Zayọn: “Chineke unu aghọọla Eze!”+ 8 Geenụ ntị! Ndị nche unu na-eti mkpu. Ha ji otu olu na-eti mkpu ọṅụ. N’ihi na ha ga-eji anya ha hụ mgbe Jehova ga-akpọlata ndị bi na Zayọn. 9 Ebe ndị dakpọsịrị adakpọsị na Jeruselem,+ na-enwenụ obi ụtọ, jirikwanụ otu olu na-eti mkpu ọṅụ,N’ihi na Jehova akasiela ndị ya obi.+ Ọ gbapụtala Jeruselem.+ 10 Jehova emeela ka mba niile hụ aka ya dị nsọ.+ Ndị niile nọ n’ụwa ga-ahụ ihe Chineke anyị mere iji zọpụta ndị ya.+ 11 Pụọnụ, pụọnụ, sinụ ebe ahụ pụọ.+ Unu emetụkwala ihe na-adịghị ọcha aka!+ Unu ndị na-ebu arịa Jehova,+Sinụ ebe ahụ pụọ,+ debekwanụ onwe unu ọcha. 12 Unu agaghị eji ụjọ pụọ. Unu agaghịkwa eji ọsọ gbapụ,N’ihi na Jehova ga-ebutere unu ụzọ.+ Chineke Izrel ga na-anọkwa unu n’azụ na-echebe unu.+ 13 Ohu m+ ga-egosi na ọ ma ihe n’ihe ọ bụla ọ na-eme. M ga-eme ka ọ nọrọ n’ọkwá ukwu. M ga-ebuli ya elu. A ga na-akwanyekwara ya ezigbo ùgwù.+ 14 E mere ya ihe otú ndị ma ya na-agaghịzi amata ya. Ihe a e mere ya kpara mma ya aka ọjọọ. O nwetụbeghịkwa onye e mere ihe e mere ya. Ọ tụrụ ọtụtụ ndị n’anya, ha ekporopụ anya na-ele ya. 15 Otú ahụkwa ka ọ ga-esi tụọ ọtụtụ mba n’anya.+ Ọnụ ga-emechi ndị eze n’ihi ya,+N’ihi na ha ga-ahụ ihe ọ na-enwetụbeghị onye kọrọ gbasara ya. Ha ga-atụgharịkwa uche n’ihe ha na-anụtụbeghị.+
^ Na Hibru, “Yiri ike gị dị ka uwe.”